အာရပ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မိဘများအကြားအွန်လိုင်းပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအကြောင်းဟောပြောချက် - လိင်ပညာရေးနှင့်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အရည်အသွေးဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်မှု
J ကို Med အင်တာနက်ကို Res ။ 2018 အောက်တိုဘာ 9; 20 (10): e11667 ။ Doi: 10.2196 / 11667 ။
Gesser-Edelsburg တစ်ဦးက1, Abed Elhadi အာရေဗျ M က2.
အဆိုပါ 21st ရာစုအင်တာနက်တော်လှန်ရေးမတိုင်မီတည်ရှိဘယ်တော့မှသောစကေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရရှိနိုင်ပါနှင့်လက်လှမ်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အတော်များများကလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းကျား-ကျပုံစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တော်မှာပါပြီ။ ဒါဟာအစကအခြားအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေနဲ့လိငျနှငျ့ဆကျခံရဖို့သလိုပဲ။ ရှေးရိုးစွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမညီကြောင်းနှင့်အတူပဋိပက္ခများစေပါတယ်။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်တားဆီးသောအတားအဆီးများနှင့်အခက်အခဲများသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်မိခင်များ၏သဘောထားအမြင်အရသိရသည်ညစ်ညမ်းကြည့် enable ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဒီလေ့လာမှုကအရည်အသွေးသုတေသနနည်းစနစ်များနှင့် 40 သင်တန်းသားများနှင့်အတူ In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပါဝင်ပတ်သက်။ ဒီလေ့လာမှုက 20 အသက်အရွယ်အုပ်စုများ (2-14 နှစ်နှင့် 16-16 နှစ်) အားဖြင့်နမူနာ 18 အာရပ်မြီးကောင်ပေါက်, ပါဝင်သည်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းထံမှမြီးကောင်ပေါက်များ၏ 20 မိခင်များ။
တွေ့ရှိချက်များအရမိခင်များသည်ယောက်ျားလေးများမှညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုမျက်စိမမြင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင်၎င်းတို့သည်မိန်းကလေးငယ်များအနေဖြင့်ဤသို့သောအပြုအမူကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တားမြစ်ခြင်းနှင့်ငြင်းဆိုခြင်းကိုပြသသည်။ ယောက်ျားလေးများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုနေကြောင်း၊ မိန်းကလေးများကမူကြည့်ရှုခြင်းကိုငြင်းပယ်သော်လည်းသူငယ်ချင်းများကမူညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုသည်ဟုဝန်ခံကြသည်။ ခေတ်သစ်နှင့်ရိုးရာတန်ဖိုးများအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သောပtheိပက္ခကြောင့်ယောက်ျားလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်နှင့်ကြည့်ပြီးနောက်အပြစ်ရှိသည်ဟုလေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိခင်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များကဝက်ဘ်အခြေပြုလိင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်အပြုအမူများကိုလျှော့ချရန်ပွင့်လင်းသောလိင်ဆိုင်ရာဟောပြောချက်လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါဟာအာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက၎င်း၏မရှိခြင်း၏အကြမ်းဖက်အကျိုးဆက်များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်အားပေးမယ့်နည်းလမ်းရှာရန်လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဦးကထိန်းချုပ်ထား, ပွင့်လင်းနှင့် critical လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်လူငယ်ကိုပိုမိုသိရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်ရှာဖွေရေးကိုရည်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ, porn ကြည့်ရှုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလုပ်ကိုကူညီနိုင်ဘူး။
KEYWORDS: အစ္စရေးအာရပ်မြီးကောင်ပေါက်; ဟောပြောချက်, အင်တာနက်; porn ကြည့်; ညစ်ညမ်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်အပြုအမူ; လိင်; မညီကြောင်း
အစ္စလာမ့်ဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြား, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်အားပေးအားမြှောက်မပေးပါ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကုရ်အာန်၏ဘာသာရေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ, သာလက်ထပ်လူတွေကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်, ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက် [အလားအလာအိမ်မထောင်မီလိင်အားပေးဖို့စဉ်းစားသည်1] ။ သို့သော် Roudi-Fahimi [အဖြစ်2] ဘာသာရေးတားမြစ်ချက်ရှိနေသော်လည်းလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တကယ်တော့လည်းမရှိ, သူတို့ရဲ့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ညွှန်ပြ။ ထို့ကြောင့်, အသိအမြင် [လူဦးရေ contraceptives အကြောင်းကိုနှင့်မျိုးစုံမိတ်ဖက်ထံမှထွက်ပေါ်လာသောလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STDs) အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသင့်ကြောင်းအာရပ်နိုင်ငံများတွင်အချို့စိုက်ပျိုးထားပါတယ်2] ။ သို့သော်အာရပ်နိုင်ငံများအတွက်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များအားဖြင့်လူငယ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့မတူဘဲအတွက်အာရပ်လူငယ်အိမ်မထောင်မီလိင်ရှိသည်သောမိဘများကလူမှုရေးမညီကြောင်းနှင့်ငြင်းပယ်နေဆဲရှိသည် ဖြစ်. , ထို့ကွောငျ့, အများပြည်သူနှင့်ပြည်တွင်းနယ်ပယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်လည်းမရှိခဲ့ချေဖြစ်ပါတယ် .
အဖြစ်မှန်မှာတော့ယနေ့အာရပ်လူငယ်အတွေ့အကြုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်, porn ကြည့်ရှုခြင်း, အိမ်မထောင်မီလိင် [3-6] ။ အဓိကအကြောင်းရင်းများ [ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, အာရပ်အသိုင်းအဝိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့အနောက်တိုင်းဒြပ်စင်များ၏စိမျ့ဖို့အကြီးအကျယ်ဆက်စပ်ကြီးမားအသွင်ပြောင်း, အာရပ်နှင့်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြားကွာဟချက်ကိုကျဉ်းမြောင်းသည်ဟုနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများခံကြပြီဖြစ်ကြောင်း7,8] ။ အမြိုးသမီးမြားပညာရေးတိုး, မွေးဖွားလျှောက်လျော့နည်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအချိန်ကိုက်ရွှေ့ဆိုင်းသည်အဘယ်မှာရှိခေတ်မီ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအဆင့်မြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်အာရပ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အာရပ်လူငယ်သစ်ကိုမီဒီယာတော်လှန်ရေးနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့သောနည်းပညာများကို၏သက်ရောက်မှုဖို့အဟောင်းများမျိုးဆက်ထက်ပိုထိတွေ့လာနေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင် '' အစဉ်အလာအထီးကျန်ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့သစ္စာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုခငျြနေစဉ်အတွင်းအာရပ်လူငယ်လက်ရှိတွင် [တစ်ဦးကို dual အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့ကဆွဲဆောင်နေကြသည်ဘယ်မှာအဖြစ်မှန်နှင့်လစ်ဘရယ်နည်းပညာဆိုင်ရာအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုအဘို့အတောငျ့နေထိုင်နေကြ8-10].
လေ့လာရေးလိင်ဟောပြောချက်၏သဘောသဘာဝ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲသည်လမ်းကို [ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများ၏အမှန်တကယ်အပြုအမူနဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ပြခဲ့ကြ11,12] ။ ပေးခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်၏မရှိခြင်းကိုလည်း [အဝိဇ္ဇာမှဦးဆောင်13] စိုးရိမ်မှုတွေနှင့်အာရပ်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောအာရပ်မိန်းကလေးငယ်များ [ရာသီ၏အရိပ်လက္ခဏာများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံအံ့သြစရာအဖြစ်သူတို့ကိုလာသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်13,14].
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ချက် Standard နှင့်အာရပ် Society မှာအမြိုးသမီးမြား၏အခြေအနေ
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလိင်သရုပ်ဆောင်များ၏ကျားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားကိုစီရင်သောကျယ်ပြန့်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်15] ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ [ "The-အထီး-in-the-ဦးခေါင်း" ကတဆင့် policed ​​နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်16] ။ ဤအယူအဆ, လိင်ကွဲအောက်မှာအထီးပါဝါကိုရည်ညွှန်းသည်ဣတ္နှင့်ပုလ်အကြားမညီမျှမှုဆက်ဆံရေးဦးဆောင်သည့်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှင့်အထီးလိင်နှစ်ဦးစလုံး၏ထိန်းချုပ်မှုမှပြောပြတယ်။ The-အထီး-in-the-ဦးခေါင်းတစ်ဦးကဝိသေသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးအသံနှင့်ဤဧရိယာ၌အထီးကြီးစိုးပြောဆိုမှုများ၏တစ်ပြိုင်နက်ဆူညံသံများတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုအလားတူအပြုအမူများအတွက် derogated နှင့် stigmatized ခံရဖို့ယုံကြည်ကြသည်သော်လည်းယောက်ျားလေးများနှင့်ယောက်ျား, nonmarital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များအတွက်အခြားသူများထံမှချီးမွမ်းအပြုသဘောအရည်အသွေးများလက်ခံရရှိရန်စဉ်းစားနေကြသည်။ အမျိုးသမီးတွေအတူတူလှုပ်ရှားမှုအတွက် derogated နေကြသည်သော်လည်းတစ်နည်းအားဖြင့်လူတို့သညျ [, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အကျိုးခံစားနေကြ17,18] ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံစံကျား, မကျပုံစံမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်: သူတို့ကယောက်ျားကနေမျှော်လင့်ထားကြသည်သော်လည်းလိင်နှင့်အလိုဆန္ဒ, ဣတ္မရှိကြပေ။ လိင်ကွဲ [အထီးအကြည့်အောက်မှာဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်19] အမြိုးသမီးမြားရဲ့အလိုဆန္ဒအသံတိတ်နေသည်သော်လည်း, ယောက်ျားပါဝါ၏အနေအထား၌ရှိကြ၏သူတို့လိင်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏ဟောပြောချက်များကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်ဒါကြောင့်။ အမြိုးသမီးမြား [သူတို့၏အလိုဆန္ဒဖုံးကွယ်ကြောင့်မမြင်နိုင်စေရန်ထင်နေကြတယ်19] လိင်ကွဲယောက်ျားပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကဖျောပွနိုငျသညျ။ ထို့ပြင်သူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖွစျလာနိုငျသောကွောငျ့, လိင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည်, လူကိုအလွယ်တကူကွာဤအခြေအနေကနေလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, အမျိုးသမီးများ [တာဝန်ပခုံးရန်ရှိသည်18].
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံထိုကဲ့သို့သောအာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြီးစိုးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်များအရှိန်။ အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်မိန်းမမူကားယောက်ျား၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစဉ်းစားသည်။ သူမ၏အဆင့်အတန်းမညီမျှမှု, သို့သော်ထိုလူများ၏အလိုဆန္ဒများသူမ၏အပြုအမူ dictate မသာ။ လူ၏သူတွေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒကိုသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စကားရပ်ကိုမကြာခဏ [အဲဒီလူရဲ့ဂုဏ်အသရေဆန့်ကျင်ကာပြစ်မှုနှင့်မိသားစုဂုဏ်အသရေအဖြစ်ယူဆနေကြသည်20].
ထို့ကြောင့်ယောက်ျား, သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သူတို့၏သာလွန်အနေအထားနှင့်အမျိုးသမီး၏သူတို့ရဲ့အမြင်ပေးထားမကြာခဏအမျိုးသမီးများကိုမုဒိမ်းကျင့်။ ဒါဟာ [(လူတကျိန်းသေသူ့ဇနီးမုဒိမ်းကျင့်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်) မုဒိမ်းမှုအလွန်အယူအဆအများအပြားအာရပ်နိုင်ငံများအတွက်တည်ရှိခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးသောလုပ်ရပ် extramarital လိင်ကြောင်းမဟုတျကွောငျးကိုအလေးပေးရန်အရေးကြီးပါသည်21,22] ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာဥပဒေများအရ,4မျက်မြင်သက်သေများမကြာခဏမုဒိမ်းမှုတစ်ခုတာဝန်ခံလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။4သက်သေများ၏မရှိခြင်းအတွက်, အစားထိုးမုဒိမ်းမှုသို့မဟုတ်၏တာဝန်ခံကိုထောကျပံ့ဖို့အရေးကြီးဆုံးအထောက်အထား, extramarital လိင်အဆိုပါအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ဝန်သည်။ ထိုလူမှာအားလုံးစွပ်စွဲသည်မဟုတ်သော်လည်းထိုမိန်းမသည်, အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုအတွက်စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်အပြစ်ပေးသည်။ အခြေအနေကရှင်းရှင်းလင်းလင်း [အမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့်သားကောင်အပေါ်တစ်ဦးကို double ပြစ်ဒဏ်နေရာ23] ။ ထိုမိနျးမရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ "လျော့ပါး" တချို့အာရပ်နိုင်ငံများအတွက်သူမကအပြစ်ပေးမဟုတ်ဘဲဖခင်တစ်ဦးခြင်းမရှိဘဲထိုသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အမိန့်ထုတ်သည်မဟုတ် (သင်တန်း၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပင်မုဒိမ်းမှုကိစ္စများတွင်, အခွင့်မရှိကြ)  ။ အမြိုးသမီးမြားအပျေါအနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်စပ်နောက်ထပ်ပြဿနာလည်းဣသရေလအမျိုး၌အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သည့်ဒါခေါ်မိသားစုဂုဏ်အသရေ၏နောက်ခံပေါ်တွင်လူသတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လူတို့ရှေ့မှာသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ကိုပြင်ပလိင်ဆက်ဆံဘို့တရားသဖြင့်စီရင်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်, အမျိုးသမီးများလူ့အဖွဲ့အစည်းများကစစ်ကြောစီရင်ခြင်းနှင့်ပင် "မလျော်ကန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ" အဖြစ်သတ်မှတ်ဘာများအတွက်အသတ်ခံနေကြ .
အင်တာနက်ကို-enabled devices များ [ထိခိုက်ပါပြီတစ်ခုရရှိနိုင်မှုနှင့်မြန်နှုန်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်လောင်ဖို့အားလုံးကိုအသက်အရွယ်မရွေးလူ enabled နှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်အသိပညာပြောင်းလဲပြီ26,27].
အင်တာနက် [အခြားမီဒီယာထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်စဉ်းစားသည်28] နှင့်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မတော်တဆညစ်ညမ်းပစ္စည်းအွန်လိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့သူလူငယ်၏နံပါတ်သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းပြသထားပါတယ် [29,30].
အင်တာနက် [အများအပြားလူငယ်၏ဘဝအသက်တာ၌တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့နှင့်စားပေးရာအရပျယူထားသော29,31,32] ။ ဥပမာအားဖြင့်, 12 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ 14 နှစ်ပေါင်းလူတွေကိုအသက် 13 ၏ကမ္ဘာ့အင်တာနက်ကအစီရင်ခံစာအားဖြင့်စစ်တမ်းတစ်ခုကနေဒါလူငယ်၏ဗြိတိန်၏ 100%, ခကျြ၏အစ္စရေး, 98% ၏ 96% နှင့် 95% မှန်မှန် [အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. သတင်းပို့ကြောင်းတွေ့ရှိရ33].
အင်တာနက် [ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ဝယ်ယူများအတွက်အရင်းအမြစ်မြင့်မားစာတတ်မြောက်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်လူငယ်ထမ်းဆောင်နိုင်34] ။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာ, အချို့ sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအသုံးပြုသူများအတွက်ထိုသို့သောညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအဖြစ်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုငျ [35,36].
ကမ်ဘာပျေါတှငျညစ်ညမ်း၏ဥပဒေရေးရာ status ကို [နိုငျငံတစျနိုငျငံမှအခြားမှကျယ်ပြန့်ကွဲပြားခြားနားသည်37], ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း contents တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ထားရန်ကြိုးစားများသောအားဖြင့်ကြောင့်လက်လှမ်း၏လွယ်ကူခြင်းမှပျက်ကွက်ခဲ့ကြ  ။ လေ့လာမှုများအကြားပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုအလွန်ကွဲပြားပေမယ့်စနစ်တကျလေ့လာမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ [10 နှစ် 18 နှစ်ပေါင်းမှလူငယ်အမြင် porn ညွှန်ပြခဲ့ကြ39].
သူတို့ရည်ရွယ်ဘူးသည့်အခါလူငယ်တို့လူကြီးများကိုလည်း [ "အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်" ညစ်ညမ်း contents တွေကိုထိတွေ့နိုင်ပါသည်40-42] ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိလူငယ်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်နှင့် ပတ်သက်. မြင့်မားသောမသေချာမရေရာခံစားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုထူးခြားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်  ။ ထို့အပြင်လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့လမ်းကိုလူငယ်လိင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်းစားပါ။ ကြီးမားတဲ့အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများစစ်တမ်း, ယောက်ျား၏ 51% နှင့်သူတို့ [32 နှစ်ရှိခဲ့ကြသည်ရှေ့တော်၌ထိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ဝန်ခံအမျိုးသမီး၏ 13% အလိုအရ44] ။ တစ်မိသားစု setting ကိုအတွင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်, ညစ်ညမ်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်စေနှင့်လူ့လိင်၏သဘောသဘာဝနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွားစေပါသည်။
ညစ်ညမ်းရှုမြင်တဲ့သူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသူများ '' လိင်ပြောင်းလဲမှု, သူတို့၏လိင်ပိုင်းမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အပြုအမူဆီသို့သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေ [အညီပုံဖော်နေကြတယ်43-45] ။ 2343 မြီးကောင်ပေါက်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခု [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းသိသိသာသာလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့မသေချာမရေရာမှုများတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိရ43].
အသက်အရွယ် 14 နှစ်ပေါင်းရာမှဆယ်ကျော်သက် [ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ရှိသည်ဖို့သူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုကနေကြီးထွားလာလူမှုရေးဖိအားရင်ဆိုင်ရသောကွောငျ့ 16-16 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့် 18-14 နှစ်ပေါင်း porn ကြည့်ဘို့အထိခိုက်မခံအသက်အရွယ်များမှာ46,47] ။ ဤအအသက်အရွယ်မှာမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသူတို့ရှုမြင်ကြသည်နှင့်ညစ်ညမ်းထံမှသိရှိခဲ့ရာကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။
ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်အွန်လိုင်း porn ၏နေရာအနှံ့မှတစ်ဦးကိုစနစ်တကျစစ်တမ်း [2016 ကျင်းပခဲ့သည်48] (အကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ၏နည်းစနစ်များတွင်ကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်း) ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသောပိုပြီးအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းကျား-ကျပုံစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တော်မှာခဲ့သည်။ ဒါဟာအစနှစ်ဦးစလုံးကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သားကောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ဖြစ်ပျက်မှု, ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံ, နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ထင်ရှား။ ,
porn ကြည့်ရှုလေ့ရှိ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှု၏မြီးကောင်ပေါက် '' အောက်ခြေအဆင့်မှဦးဆောင်49] ပို. လစ်ဘရယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးနှင့်ရွယ်တူလိင်တက်ကြွဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားယုံကြည်ချက်, အသက်ပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြုစုပျိုးထောင် .
ယဉ်ကျေးမှုစံချိန်စံညွှန်းပြင်ပလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက် [မေတ္တာနှင့်ရငျးနှီးမှုနှငျ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာကတိကဝတ်မပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်အလိုဆန္ဒမှမသက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်လိင်တစ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်အမြင်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ50] ။ ရွယ်တူချင်းဖိအား, porn ကြည့်နှင့်ကြီးစိုးတန်ဖိုးများပေါင်းစပ် [အန္တရာယ်များအပြုအမူမှဦးဆောင်51].
လေ့လာရေးကြောင်းအများအားဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေညွှန်ပြခဲ့ကြပေမယ့်လည်းမိန်းကလေးတွေကပိုသူတို့ porn ရှုမြင်သည့်အခါ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျဖလှယ်) "sexting" တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ လူငယ်များက sexting မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမထီမဲ့မြင်နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစေပါတယ်။ လေ့လာရေး [sexting အရက်သောက်သုံးခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသောအခါကထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆုံးရှုံးမှုမှလူငယ်ဦးဆောင်ကြောင်းညွှန်ပြ52,53] ။ ထိုမှတပါး, ညစ်ညမ်းထိတွေ့နေသောဆယ်ကျော်သက် [အမျိုးသမီးသားကောင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးဘို့တာဝန်နျးသော "မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ" ကိုထောက်ပံ့သောရာထူးဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ26,54].
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုနှင့်လူငယ်ယေဘုယျအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအာရပ်နိုင်ငံများအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ကြည့်ရှုအလေ့အထအပေါ်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိပါသည်။ ဘာသာရပ်လေ့လာကြပြီလေ့လာရေးအင်တာနက်ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမညီကြောင်းဆန့်ကျင်ကြောင်း contents တွေကိုမှအာရပ်လူငယ်ဖျောထုတျကွောငျးကိုတွေ့ပြီ။ အဆိုပါလေ့လာမှုများ [ဘာလို့လဲဆိုတော့အာရပ်နိုင်ငံများအတွက် proscription နှင့်ကြီးကြပ်မှု၏, လူငယ်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အမြင်ညစ်ညမ်းဆည်းပူးတွေ့ရှိခဲ့55].
ရှေးရိုးစွဲအသိုင်းအဝိုင်းနေထိုင်အာရပ်လူငယ် [၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်သူတို့၏ဘဝအသက်တာ၌အခြားအခွင့်အာဏာကိန်းဂဏန်းများများ၏တုံ့ပြန်မှုများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကွောကျရှံ့ထဲကမသာလျှို့ဝှက်စွာ porn စောင့်ကြည့်43] ဒါပေမယ့်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လစ်ဘရယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်လောကလူငယ်များအတွက်မတည်ရှိပါဘူးသောဘာသာရေး proscription ၏ .
ဒါဟာ [အာရပ်မြီးကောင်ပေါက်တိတ်ဆိတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရှေးရိုးစွဲကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျသောကွောငျ့, စိတ်ခံစားမှုစေတနာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ contents တွေကို filter မှ tools တွေကိုသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုအနောက်တိုင်းလူငယ်၏ထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်13,57] ။ ဥပမာ, လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့လူငယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကျောင်းသားတစ်ဦးလေ့လာမှုအတွက်ကြောင့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လောင်းတမ်းကစား [ကြည့်ရှုရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်58].
အတော်များများကလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကောက်ယူနေကြသည်။ သို့သျောလညျး [Owen et al အားဖြင့်စနစ်တကျစစ်တမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း59] ဒါကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအားပေးအားမြှောက်ဖွငျ့ဤဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာဆက်လက်လိုအပ်ပေသည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဟောပြောချက်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုရည်မှတ်အာရပ်လူငယ်အပေါ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ စာပေအတွက်လေ့လာမှုများအများစုဟာ porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့ပိတ်ထားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာမေးမွနျးခဲ့ပြီးသောအပေါ်တိကျသောကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့သဘောထားတွေနဲ့သဘောထားအမြင်၏ကြိမ်နှုန်းညွှန်ပြကြောင်းအရေအတွက်လေ့လာမှုများဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အနည်းငယ်အရည်အသွေးသုတေသနလေ့လာမှုများ, သူတို့ထံမှပေါ်ထွန်းသည်ဟုအာရပ်လူငယ်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအဖြစ်ကွာဟချက်များနှင့်ပဋိပက္ခများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်ရဲ့ features တွေကိုမှာနက်ရှိုင်းသောကြည့်ယူအမည်ရ, In-depth ကို "မကျြနှာကို-to-မျက်နှာ" အင်တာဗျူးရှိပါတယ် ။
အထူးသညျဤလူဦးရေကိုရည်မှတ်အချက်အလက်များ၏ sparsity ၏အလငျး၌, ဒီလေ့လာမှုအာရပ်လူငယ်များနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌မိခင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်များ၏သဘောထားအမြင်အပေါ်, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးပုံစံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုအာရပ်လူငယ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအတွက်ထိရောက်သောနှင့်နေရာချပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်၏မူဝါဒမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုအပေါ်အန္တရာယ်ဆက်သွယ်ရေးတခုတခုအပေါ်မှာအလေးပေးထားကြောင်းထောက်ခံချက်များရေးဆွဲရေးအတွက်အခြေခံပေးနိုင်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုကလေ့လာမှုသင်တန်းသားများ၏ Prism ကိုတဆင့်တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ In-depth ကိုလေ့လာခွင့်ပြုထားတဲ့အရည်အသွေးသုတေသနဝန်ထမ်း။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်အရည်အသွေးသုတေသနနည်းလမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက် [authentication ကကိုယ်စားပြုထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်အုပ်စုတစုကိုရွေးချယ်ခြင်းတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားနှင့်အတူတစ်အချို့သောလူဦးရေရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနေဖြင့်လေ့လာခဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်60].
40 ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကစုစုပေါင်းဒီလေ့လာမှုအဘို့အတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုက (20 အာရပ်မြီးကောင်ပေါက်ဖွဲ့စည်းစားပွဲတင် 1), စာပေနှင့်အညီ, ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်၌နေသော2အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်: 14-16 နှစ်နှင့် 16-18 နှစ်ပေါင်း  ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 20 မိခင်များ (စားပွဲတင် 2) နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏မြီးကောင်ပေါက်များ၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ သာမိခင်များအာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းယောက်ျားယေဘုယျအားဖြင့်လိင်အပေါ်တစ်ဦးစကားလက်ဆုံရှိသည်ဖို့ငြင်းဆန်, သမီး၏အထူးသဖြင့်ဘိုးဘေးတို့သမယ်လို့သောယူဆချက်အပေါ်ဘိုးဘေးတို့ရှေးခယျြနှင့်မခံခဲ့ရပါ။
်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အင်တာဗျူး Process ကို
လျှောက်လွှာပေးခဲ့သည်ဟိုင်ဖာတက္ကသိုလ်တွင်လူ့ဘာသာရပ်များနှင့်အတူသုတေသနနှင့်အပြည့်အဝကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက် (no.439 / 17) အတွက်လူမှုဝန်ထမ်းဌာနနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကျင့်ဝတ်အဖွဲ့သို့ပေးပို့တင်ပြလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကိုနာဇရက်မြို့သား, Kafr Sullam, Reina, Kafr nin နှင့် Ein Mahel အတွက်အာရပ်ကျောင်းများတွင်၏ရည်ရွယ်ချက်နမူနာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကျောင်းများလူငယ်လူဦးရေရဲ့တစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောပရိုဖိုင်းကိုအောင်မြင်ရန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသုတေသီများကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်နှင့်ခရစ်ယာန်ကနေလူငယ်အမြည်းမှနာဇရက်မြို့သားနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများသို့ချဉ်းကပ်။ ဒါဟာနာဇရက်မြို့သားအတွက်လူငယ်ယုဒလူတို့အပါအဝင်တစ်ဦးရောနှောမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထိုကဲ့သို့ Kafr Sullam, Reina, Kafr nin နှင့် Ein Mahel များ၏ရွာများတွင်အဖြစ်သက်သက်သာအာရပ်လူဦးရေရဲ့အထီးကျန်မှုတွေကနေအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသည်။
ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏မိခင်လူတန်းစား WhatsApp ကိုအုပ်စုများမှတဆင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါချဉ်းကပ်သုတေသနရည်မှန်းချက်ထွက်ချထားနှင့်သုတေသီများ၏ 1 များ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်သူမ၏ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်သည်။ အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်သူတို့သားသမီးအင်တာဗျူးခွင့်ပြုချက်များအတွက်မိခင်များဟုမေး၏။ မိခင် '' ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်ဟာမြီးကောင်ပေါက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိခင်များသီးခြားစီချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအဘယ်သူ၏မိခင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုမှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရဖို့သဘောတူညီခဲ့သည့်ဆယ်ကျော်သက်အင်တာဗျူးဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ခဲ့သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံမေးမြန်းများသောအားဖြင့်ကသူတို့နေအိမ်များတွင်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအဆင်ပြေသလိုခံစားရတယ်နေရာတိုင်းမှာအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အတူအင်တာဗျူးများကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင် 1 ။ ဆယ်ကျော်သက်တွေ့ဆုံမေးမြန်း: sociodemographic data.View ဒီစားပွဲပေါ်မှာ
စားပွဲတင်2။ မိခင်တွေ့ဆုံမေးမြန်း၏ Sociodemographic ဒေတာaဒီစားပွဲ .View
မိခင်နှင့်အတူအင်တာဗျူးများ၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူးများ 45 မိနှင့် 1 အကြားနာရီကြာမြင့်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးအင်တာဗျူးများလုပ်ဆောင်သွားရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့တဲ့သုတေသီများ၏ 1 အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူးများမှတျတမျးတငျထားနှင့်ကူးရေးသောခဲ့ကြသည်။
သုတေသန Tools များ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအင်တာဗျူးများထက်အာရုံအုပ်စုများ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. လွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုရန်ယုံကြည်မှုပေးစေခဲ့သည်။ Semistructured protocols များသုတေသန subpopulations မှချိန်ညှိခြင်း, အင်တာဗျူးတွေအဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူးများ, အာရအတွက်သင်တန်းသားများကို '' မိခင်ဘာသာစကားကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတပါး,2protocols များကဒီလေ့လာမှုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ: အမြီးကောင်ပေါက်နှင့်မိခင်အဘို့။ အာရပ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် protocols များရွယ်တူများနှင့်မိဘများ, သတင်းအချက်အလက်လိင်နှင့်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်အကြောင်းကိုရှာဖွေနေနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်များ၏အမြင်အပေါ်မေးခွန်းများကိုလည်းပါဝင်သည်။ မိခင်နှင့်အတူအင်တာဗျူးများများအတွက် protocols များဟာသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို, အိမ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်, သူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရင်းမြစ်များနှင့်လိင်ပညာရေးပါဝင်သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက် [အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်62] အောက်ပါဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု. : အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့် subthemes ဖော်ထုတ်နေစဉ်ပထမအဆင့်အတွက် themes များ, သီးခြားစီ, တစ်ခုချင်းစီလူဦးရေသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မိခင်အဘို့အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် coded ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင်အသက် 3-14 နှစ် 16 သုတေသနအုပ်စုများ-မြီးကောင်ပေါက်အကြားသညျထကြောင်း themes များ, ဆယ်ကျော်သက်အသက် 16-18 နှစ်ပေါင်းများနှင့်မိခင်များ-ခဲ့ကြသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် coded ။ တတိယအဆင့်တွင်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ခွဲသီးခြားစီပေါင်းစည်းခဲ့သည်; တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အင်တာဗျူးများနှင့်မိခင်အားလုံးသီးခြားစီပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်, ဘက်ပေါင်းစုံစူပါအမျိုးအစားသုတေသနလူဦးရေအားလုံးအတှကျဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။
အင်တာဗျူးများ, မှတ်တမ်းတင်ထားသောစာသားအဖြစ်နှင့်လယ်ဒိုင်ယာရီ logged in ဝင်သောခဲ့ကြသည်။ ဒါက [သင်တန်းသားများနှင့်သုတေသီများအားဖြင့်တွေ့ရှိချက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏ထိန်းချုပ်မှုကနေလက်ခံရရှိသောအချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ၏စာမေးပွဲ enabled63].
လယ်ပြင်ဒိုင်ယာရီ၏မှတ်တမ်းထံမှထင်မှတ်မရနိုငျသောအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်မေးခွန်းများကိုနှင့် (ထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်အမူအရာသို့မဟုတ်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေကဲ့သို့) nonverbal တုံ့ပြန်မှုမှတွေ့ဆုံမေးမြန်းနေဖြင့်ခုခံရေးအစည်းအဝေးကာလအတွင်းအချိန်နှင့်အင်တာဗျူး၏အရပျ၏မှတ်စုများ, ဒိုင်းနမစ်ပါဝင်သည် အင်တာဗျူး။ နှစ်ဦးစလုံးဟာလူငယ်နှင့်မိခင်အဘို့လိင်များ၏ဘာသာရပ်၏ sensitivity ကိုပေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သုတေသီများ '' စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆုံးနှင့်အတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်ဟောပြောချက်အဆိုပါတွေ့ဆုံမေးမြန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဘက်စုံနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပုံတစ်ပုံပေးဘို့ကိရိယာတခုဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအင်တာဗျူး protocols များဟီဘရူးအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် Arabic သို့ဘာသာပြန်ထားသောအဆိုပါသုတေသနတွင်လူဦးရေရဲ့မိခင်ဘာသာစကား, ပြီးတော့အသုံးအနှုန်းစစ်ဆေး Hebrew သို့ Arabic အဘိဓါန်ထဲကနေပြန်ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူးများဗေီနှင့်ဟီဘရူးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျွမ်းကျင်စွာသူသုတေသီ 1 နေဖြင့်အာရဗီစာသားအဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအဆင့်ဆင့်၏နံပါတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်: တစ်2မိခင်နှင့်2မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူ protocols များစမ်းသပ်ဖို့လေယာဉ်မှူး, ဒေတာစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသုတေသီများ၏ပူးတွဲအစည်းအဝေးများ, သီးခြားစီ2သုတေသီများအားဖြင့်မှတ်တမ်း၏စာဖတ်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစားဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်သုတေသီများအကြားသဘောတူညီမှုကတဆင့် subthemes ။ ထို့အပွငျလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကို [သည့်ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာဖြစ်ရပ်ဆန်းစပ်လျဉ်းတွေ့ရှိချက်များ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုခိုင်ခံ့နိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသော subpopulations (အသက်အုပ်စုများနှင့်မိခင်များအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်), ကိုယ်စားပြု62].
အဆိုပါလူငယ်နှင့်အတူအင်တာဗျူးများနှင့်မိခင်များမှထသောအဓိကတွေ့ရှိချက်4အလယ်ပိုင်း themes များဖော်ပြသည်။ ပထမဦးဆုံးဆောင်ပုဒ်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာအင်တာနက်တော်လှန်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ contents တွေကိုများ၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမှဦးဆောင်ထားပြီးပေမယ့်လူငယ်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအကြားဟောပြောချက်တိုးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်ဆဲလူမှုရေးမညီကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ပါဘူး။ , စံတန်ဖိုးဘာသာရေး, ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အောက်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ပါ): အဆိုပါဒုတိယဆောင်ပုဒ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်တားဆီးကြောင်းအတားအဆီးပါဝင်သည်။ တတိယဆောင်ပုဒ်အင်တာနက်ဘုံဆွဲဆောင်မှုများအကြားတစ်ဦးရှေးရိုးစွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ရိုးရာစံချိန်စံညွှန်းမှအာရပ်လူငယ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ပဋိပက္ခတင်ဆက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စတုတ္ထဆောင်ပုဒ် porn ကြည့်-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။
လူအားလုံးတို့သည်မြီးကောင်ပေါက် (ဎ = 20), ချွင်းချက်မပါဘဲ, လိင်နှင့်လိင်မညီကြောင်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏မိဘများအကြားမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်ရှိကွောငျးအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာ, ယောက်ျားလေးများ၏ 1 said:
ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်မိဘများသည်လိင်အကြောင်းမပြောကြပါ။ ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာကိုအထိခိုက်မခံသော၊ တားမြစ်ထားသည့်အရာအဖြစ်ယူမှတ်ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များအနေဖြင့်လိင်ကမ္ဘာကိုနားလည်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေကြသည်။
အလားတူပင်အာရပ်မိခင်များ (ဎ = 20) လည်းလိင်နှင့်လိင်ဟောပြောချက်များ၏ဘာသာရပ်တစ်ခုလူမှုရေးမညီကြောင်းဖြစ်ပြီးသောထိုသူတို့၏သားသမီးမြားနှငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်၏မရှိခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာ, မိခင် 1 said:
သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးငယ်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဟောပြောချက်ပေးသောမိဘများကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်၎င်းအကြောင်းကိုမပြောဆိုရန်တားမြစ်ထားသည်။ သူတို့လက်ထပ်သည်အထိသင်စွန့်ခွာသည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်အရာရာတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ထိုသို့သောအကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။
လေ့လာမှုအတွက်မိခင်များအများစုဟာ (ဎ = 18) ဇီဝကမ္မဖှံ့ဖွိုးတိုးကန့်သတ်ခဲ့သည့်မိမိတို့၏သမီးများနှင့်အတူဆာပလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့သားတို့နှငျ့အတူဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ခဲ့ပါဘူး။ မိခင်တစ်ခုမှာသူမရဲ့သမီးတို့ဖို့ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကရှင်းပြသည်နှင့်၎င်းတို့၏သားတို့အားသူမ၏ခင်ပွန်းဆွေးနွေးချက်ပေးနိုင်ပါတယ် said:
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများဆွေးနွေးရန်ပြုပါ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်သောအပြောင်းအလဲကျွန်မရဲ့သားတို့နှငျ့အတူထက်ပိုမိုငါ့သမီးတို့နှင့်အတူ "ကာလ" ဆွေးနွေးပါ။ ငါကငါ့အဘို့ခက်ပါတယ်, သူတို့ကိုစကားပြောဘူး! ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးတွေမှကြွလာသည့်အခါကျွန်မအချိန်အများစုကိုသူမဆိုစိတ်ဝင်စားမှုမပြဘူးသော်လည်း, သူတို့ရဲ့ဖခင်ကစွန့်ခွာ။
လေ့လာမှုအတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသားတို့၏မိခင်များ၏ 14 အချို့သောမိခင်များ (ဎ = 1) ကယောက်ျားလေးများနှင့်အတူစကားလက်ဆုံလိင်ဆက်ဆံ၏အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုသူတို့ကိုသတိပေးနှင့်တွှေမှ STDs အပေါ်သာအာရုံစူးစိုက်ကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီးထို "လက်မထပ်မီ။ " ဥပမာတွေ့ရှိခဲ့ said:
ငါ့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကအေအိုင်ဒီအက်စ်လို STDs အကြောင်းပြောဖို့ပါ။ ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရောဂါလို့သူ့ကိုငါဆက်ပြောနေတုန်းပဲ။ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူသည်နှေးကွေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကငြင်းပယ်သည်။ ထိုရောဂါရှိသူကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်၊ မတရားပြုခြင်း၊ “ တားမြစ်ထားသော” လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံယူသည်။ သူဟာလိင်မဆက်ဆံဖို့ခြိမ်းခြောက်မှုယန္တရားကိုသုံးတယ်။
စားပွဲတင်3သူတို့သားသမီးတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်၏မရှိခြင်းကိုရည်မှတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည့်အတားအဆီးတွေ့ရမယ်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်သိချင်စိတ်နှင့်အိမ်မှာဟောပြောချက်၏မရှိခြင်းအင်တာနက်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရှာခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ထဲကအများစုဟာဦးဆောင်သူကပြောပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်အဆိုပါအင်တာဗျူးအတွက်ယောက်ျားလေးများ (ဎ = 10) သူတို့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ယောက်ျားလေးများ၏ 1 said:
ကျောင်းမှသူငယ်ချင်းများသည်ထိုဆိုဒ်များသို့သွားကြသည်။ သူတို့သည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုကြည့်ကြသည်။ ဒါဆိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းစတာတွေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီကမ္ဘာကြီးကိုသိချင်လာတယ်။
မိန်းကလေးများသည်တစ်ဦးထက်ပိုရှုပ်ထွေးရုပ်ပုံတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှထ။ တဦးတည်းလက်တွင်, မိန်းကလေး (ဎ = 6) ၏အများဆုံးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုငြင်းဆိုပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှိသမျှမိန်းကလေးများကသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာအားလုံးမဟုတ်မိန်းကလေးများအမှန်ပင် porn watch ယူဆနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ရိုက်အဲဒါကိုဝန်ခံဖို့အရှက်၏, မိမိတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ကြောင်းဖော်ပြမှကြိုက်တတ်တဲ့။ ထို့အပြင်မိန်းကလေးငယ်များလိင်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကျော်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ရှံမုဖော်ပြ။
စားပွဲတင်3။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ discourse.View ဒီစားပွဲပေါ်မှာတားဆီးကြောင်းအတားအဆီးတွေ
ဥပမာအားဖြင့်, 1 အငျတာဗြူး said:
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ် ၀ န်ရှိတယ်လို့ငါအမြဲထင်ခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ်မိန်းမတစ်ယောက်သည်ယောက်ျား၏ဖန်ခွက်မှရေကိုသောက်သောအခါ။ ကျနော့်အချက်အလက်တွေကမှားတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြတယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုအမှန်တရားပြောတယ်။ ငါစကားဝိုင်းကိုမကြိုက်ဘူး၊ ရလဒ်အနေနဲ့ငါအုပ်စုထဲကထွက်သွားတယ်။
အဆိုပါအင်တာဗျူးများအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အများစု porn နှင့်ရိုးရာစံတန်ဖိုးများကြည့်ရှုဖို့သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုများအကြားတစ်ခုအတွင်းပဋိပက္ခထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါယောက်ျားလေးအများစုဟာ (ဎ = 9) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်မိဘများထံမှလက်ခံရရှိသောရှေးရိုးစွဲပညာရေး၏အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ယောက်ျားလေးများ၏ 1 အလေးပေး:
အဲဒီမှာတလက်ပေါ်ယောက်ျားလေးများရုပ်ရှင်တွေကြည့်အရာအားလုံးကိုသိအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုသောကွောငျ့, သြတ္တပ္ပစိတ်တစ်ခုပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခနှင့်ပြဿနာဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားသောလက်အပေါ်သူတို့ကမှားယွင်းတဲ့နှင့်ဘာသာတရားကတားမြစ်ထားသိကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများ ကလကျမခံပါဘူး။
porn ကြည့်နေစဉ်သူတို့အပြစ်ရှိကြောင်းမခံစားရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးအောင်ပြီးမှသာအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရကြောင်းအစီရင်ခံသူကိုယောက်ျားလေးများ (ဎ = 7) ရှိခဲ့သည်:
စောင့်ကြည့်နေချိန်တွင်ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမပဋိပက္ခရှိသေး၏။ ရုပ်ရှင်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ကတားမြစ်ထားကြောင်း သိ. နှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးကြားရှိအတွင်းပဋိပက္ခ, ဒုစရိုက်ဖြေ, ပုံပေါ်ပါတယ်။
aforesaid သကဲ့သို့, မိန်းကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေမယ့်သူတို့မကျင့်ကပြောသည်။ သူတို့က porn စောင့်ကြည့်နှင့်အတူတတ်သောဒုစရိုက်ဖြေဖော်ပြခဲ့တယ်။ တဦးတည်းအငျတာဗြူး said:
သူတို့ကဒီအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တန်ဖိုးများကိုဆန့်ကျင်သိသောကြောင့်ငါသူတို့အပြစ်ရှိခံစားရတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အလေးပေးနှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှဖြစ်ပျက်တစုံတခုကိုမျှကြောက်လန့်သောကြောင့်ပဋိပက္ခ, မိန်းကလေးများအဘို့အများကြီးပိုဆိုးသည်သေချာပါတယ်။ သို့ဖြစ်. မိန်းကလေးငယ်များလျှို့ဝှက်စွာလုပ်နှင့်ပိုမိုပဋိပက္ခတွေ့ကြုံခံစား, သိကြများနှင့်ဖြစ်ကောင်းမိန်းကလေးများဖြစ်ပွားမှုအသတ်ခံရခံရအကြောင်းကိုကြား၏။
မိခင်များသူတို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေပြုကြောင်းငြင်းပယ်တော်မှာမိခင်နှင့်အတူအင်တာဗျူး '' မိန်းကလေးသော်လည်း, မိခင်များကိုသူတို့ porn watch သင်သိရ 'ဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးများကြောင်းညွှန်ပြ။ တဦးတည်းမိခင်ကြီးစိုးအာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများခွင့်ပြုသောအရာကိုအကြားကွာခြားချက်ရှိပါတယ် said:
အမိကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ယောက်ျားလေးများ porn စောင့်ကြည့်နှင့်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့စောင့်ကြည့်သောအရာကိုအကြောင်းပြောဆိုကြောင်းသတိပြုမိသော်လည်း, ကျွန်တော်လျစ်လျူရှုပြီးအပေါ်ကိုရွှေ့! ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးကိစ္စတွင်မပေးကြောင်းအာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ။ သူတို့ '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ '' စဉ်းစားရန်အချိန်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ကျောင်းစာအပြင်, သူတို့အပေါ်မှာအိမ်မှုကိစ္စအပေါငျးတို့သစည်းကြပ်။ တချို့ကမိသားစုဂုဏ်အသရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ငယ်ရွယ်သူတို့ကိုပယ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ပိုနှစ်သက်။
ထိုသို့သောအရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအဖြစ်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေရှိနေသော်လည်းအိမ်မထောင်မီလိင်နေဆဲထိုသူတို့အဘို့သိသိသာသာအတားအဆီးသောမြီးကောင်ပေါက်အကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးများ (ဎ = 9) ကဆက်ဆံရေးများ၏မှန်ကန်သောအမိန့် disrupts ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်မထောင်မီလိင်ဆန့်ကျင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု:
ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်လက်မထပ်မီထိုသို့ပြုလျှင်, အိမျထောငျရေးအတှကျအလိုဆန္ဒကျသွားဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအိမ်မထောင်မီလိင်ဆန့်ကျင်တယ်, နှင့်အဆုံး၌လူငယ်အများစုလက်ထပ်ရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါလူငယ် (ဎ = 18) ၏အချို့နှင့်မိခင် (ဎ = 20) သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်မထပ်မီဘာသာရေးပိတ်ဆို့မှုမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်း proscribes သောအစ္စလာမ့်ဘာသာရေး, ၏အိမ်မထောင်မီလိင်ဆန့်ကျင်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ တဦးတည်းမိခင် said:
ငါအိမ်မထောင်မီလိင်ဆန့်ကျင်တယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာတရားကတားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒုတိယအကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလက်မခံနိုင်ပဲ။ တတိယငါကမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်သူမ၏မိဘများအကြားယုံကြည်မှုချိုးဖောက်ထင်ပါတယ်။
မိသားစုဂုဏ်အသရေလည်းအိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံရာမှလူငယ်တားဆီးသောအဓိကအတားအဆီး၏ 1 ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းယောက်ျားလေးများတစ်ခုမှာကဖော်ပြထား:
ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကလကျမခံပါဘူး။ ဒါဟာ "ကရုဏာမဲ့" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူတို့လိင်ခဲ့သူတစ်ဦးကိုရှာဖွေလျှင်ရလဒ် "သတ်သေ" သို့မဟုတ်အချို့ဧရိယာကနေဒီ့ထက်ပိုပြီးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။
: ထို့ပြင်ယောက်ျားလေးများ၏ 1 မိန်းကလေးတစ်ဦးအိမ်မထောင်မီလိင်ခဲ့လျှင်သူမ "ကိုသုံးကုန်ပစ္စည်းများ" အဖြစ်ပုံဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
အမျိုးသားများအတွက်အရာအားလုံးပင်အိမ်မထောင်မီလိင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ မဟုတ်ရင်သူတို့တစ်ပတ်ရစ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသောကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, မိန်းကလေးများအိမ်မထောင်မီလိင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်။
အလားတူပင်မိန်းကလေးတွေမိန်းကလေးတစ်ဦးလက်မထပ်မီကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာလျှင်, သူမအဘယ်သူမျှမအနာဂတ်ရှိတယ်သူကပြောပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်:
လက်မထပ်မီကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့အတှကျကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောမိခင်များ, မိန်းကလေးငယ်များ (ဎ = 17) ၏အထူးသဖြင့်မိခင်ဘာသာရပ်၏ sensitivity ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုတစ်မိုးသည်းထန်စွာစျေးနှုန်းရှိသည်နိုင်ကဆိုသည်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်လက်မထပ်မီကိုယ်ဝန်ဆောင်ရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးကမိန်းကလေးသူမ၏ပြဿနာအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေသူမ၏မိဘများသို့မသွားဘူးဆိုတာကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါယောက်ျားလေး၏အချို့ (ဎ = 8) ကမိန်းကလေးသူမ၏ရည်းစားထံမှအကူအညီတောင်းခံမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်:
ငါသူမကနှင့်အတူလိင်ခဲ့မည်သူမဆိုကိုသွားမယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရဖို့ဘယ်လိုအတူတကွစဉ်းစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကောင်လေးကငြင်းဆိုသို့မဟုတ် evades လျှင်ငါသူမရဲ့ရည်းစားသို့မဟုတ်အစ်မမှဖြစ်စေ go မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သူမဖုံးကွယ်နဲ့ဖုံးကွယ်ကိုယ်ဝန်နှင့်မည်သူမဆိုမသိဘဲကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်။
သည်အခြားမြီးကောင်ပေါက်, အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများ (ဎ = 9), ဘယ်သူမှသူမကိုကူညီနိုငျသောကွောငျ့မိန်းကလေးအကူအညီတောင်းမည်သူမဆိုသို့မသွားမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်:
ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါပဲ။ သူမစကားပြောမယ်ဆိုရင်ငါသူသည်ကိုယ်အားဖြင့်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေမယ်လို့ထင်ပါတယ်, ဘယ်သူမှသူမကိုကူညီနိုင်, မသိရပါဘူး။
ဘယ်လိုခက်ခဲကြောင့်လည်းသူမ၏အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ သူမ 18 ခဲ့ကြသည်လျှင်သူမ 16 သို့မဟုတ် 17 ဖြစ်လျှင်ထက်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်။ ငါထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ၌သာသူမ၏မိဘများကကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမဟာသူမ၏မိဘများကိုသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးများ၏မိခင်တစ်ဦးသည်လူကန်းကိုမျက်စိလှည့်သော်လည်း, မိခင်များ (ဎ = 16) ၏အများစုကိုသူတို့သား watched ရုပ်ရှင်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးရဲ့လိင်ပညာရေးအဘို့မိမိတို့အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုစိုးရိမ်မှုတွေနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကြောင်း:
သငျသညျဘဝရုပ်ရှင်နဲ့တူမဟုတျကွောငျးကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ လိင်နှင့်သူတို့လိင်ဆက်ဆံလမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကယ့်ကိုရွံရှာဘွယ်လမ်းအတွက်တင်ပြကြသည်နှင့်ရလဒ်အဖြစ်သူတို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားအသက်တာ၌ထက်လိင်ကြည့်ပါ။ ငါသူတို့တရားမျှတသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရုပ်ရှင်မထင်ကြဘူး။ အကြောင်းတရားများစွဲနှင့်ကွာရှင်းကိုကြည့်ရှုခြင်း။ သူကစောင့်ကြည့်သောအရာကိုနဲ့တူသောအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့သူမကိုမေးသော်ကြောင့်ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးတက်ဖဲ့သောအခါငါအမှုပေါင်းအများကြီးအကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဒါဟာပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ကွာရှင်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
မြီးကောင်ပေါက်အဆိုအရ, ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ contents တွေကိုမှအမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါထိတွေ့မှုကိုလည်းငွေညှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစေပါတယ်။ ဥပမာ, မြီးကောင်ပေါက် (ဎ = 18) ၏အများဆုံးအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုမပို့သဖြင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဆိုပါယောက်ျားလေးများတစ်ခုမှာ said:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမုဒိမ်းမှု, ယနေ့မသာထိုသို့သောညစ်ညမ်းပုံနဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ဝသကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် blackmailing ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏အမှုများစွာရှိနေကြသည်။ ယနေ့တွင်အဝတ်အချည်းစည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုမပို့မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဖြစ်ရပ်ဆန်းရှိသေး၏။
မကြာခဏကျွန်တော်မိန်းကလေးလိင်အကြောင်းကိုသိရန်ခွင့်မပြုပါဘူး, နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်မှာကျနော်တို့ကယောက်ျားလေးများအပေါငျးတို့သ watch နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ငါညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအကြောင်းပြောနေတာပေါ့။ သူတို့ရသတင်းအချက်အလက်အများစုမှာမှား၏။ ဒါဟာကျနော်တို့သတင်းအပေါ်အကြောင်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစကားကိုနားထောငျထားတဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကထင်ဟပ်နေသည်။
မိန်းကလေးများ၏မိခင်အများစုဟာ (ဎ = 16) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှင်မြန်စွာသူတို့အားတရားမဝင်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအပေါငျးတို့သဖြန့်ဝေကူညီ apps များရရှိမှုနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဆန့်ကျင်သူတို့သမီးသတိပေး၏အရေးပါသောအအရေးပါမှုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်:
အဲဒီဓါတ်ပုံတွေကိုအခွင့်ကောင်း ယူ. သူတို့ကိုပြောင်းလဲသွားသူတွေကိုအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်၏ဓာတ်ပုံများကို ယူ. WhatsApp ကိုအုပျစုမြားမှပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်သူမ၏သို့ပြောသည်။
ယောက်ျားလေးများ (ဎ = 9) နှင့်မိန်းကလေးငယ်များ (ဎ = 7) ကျောင်းတွင်လိင်ပညာရေး၏မရှိခြင်းသည်အခြားသတင်းရင်းမြစ်များမှအချက်အလက်များအတွက်ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုဦးဆောင်နှင့်ကျောင်းများ၏မူဘောင်အတွက်လိင်ပညာရေးအလားအလာလူငယ်အချို့ကိုကူညီနိုင်မယ်အလေးပေး:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းစကားပြောမကျွန်တော်တို့ကိုလိင်သို့မဟုတ်လိင်ပညာရေးအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာကျောင်းစကားပြောရန်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအထိခိုက်မခံတဲ့ပြဿနာမျှအသိပညာရှိပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ကျနော်တို့မှားအရပ်တွင်သွားနှင့်ကြည့်ရှုပါ။ လိင်ပညာရေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုလိင်အပေါ်ပိုကောင်းတဲ့အလားအလာနှင့်အတူတစ်ဖွဲ့လုံးမျိုးဆက်မြှင့်နိုင်ဘူး။
တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာယောက်ျားလေးများအရေအတွက် (ဎ = 10) ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့လိင်ပညာရေး၏နောက်ထပ်အားသာချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အခြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်:
ငါအရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ဤအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရရှိနိုင်သည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျမတို့မိဘတွေကစကားမပြောကြဘူး၊ သူတို့လည်းကျောင်းမှာမပြောကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်စေရန်အနည်းဆုံးအရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်လိင်ပညာရေးအကြောင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၊ မုဒိမ်းမှုနှင့်စသည်တို့ကိုလျော့နည်းစေမည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အနောက်နိုင်ငံများနှင့်အတူသူတို့၏ဆက်သွယ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်အများအပြားပြောင်းလဲမှုများကြားမှ, လိင်များ၏ဘာသာရပ်နေဆဲမညီကြောင်းဖြစ်ပါတယ်  ။ အဆိုပါမညီကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာဒီလေ့လာမှုမှာရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်မိခင်များကခက်ခဲသူတို့ကိုမိသားစု setting ကိုအတွက်လိင်ဆွေးနွေးရန်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသော, ဘာသာရေး, ယဉ်ကျေးမှု, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေဖော်ပြခဲ့တယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်၏ဟောပြောချက်သာထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ကာလရတဲ့မိန်းကလေးတွေအဖြစ်အချို့သောဇီဝကမ္မရှုထောင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အဓိကအမြင်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ဘာသာတရားကတားမြစ်ထားကြောင်း, လိင်ဆွေးနွေးတင်ပြမရရမယ်လို့ဖြစ်ပြီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်အိမ်မထောင်မီလိင်တရားဝင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစာပေ [အာရပ်လူငယ်အိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံပြုဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ proscriptions ရှိနေသော်လည်းကွောငျးဖျောပွသ4,64] ။ ဒီလေ့လာမှုမှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မိခင်နှင့်အတူအင်တာဗျူးများလည်းအမှန်တကယ်အဖြစ်မှန်ကွန်ဆာဗေးတစ်အမြင်ကနေမတူညီတဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်တွင်မိခင်များမြီးကောင်ပေါက်များကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ proscription proscripted ကြောင်းသတိပြုပါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားလေးများမှမိခင်များ '' သတိပေးချက်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသော STDs ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏သတိထားပါရန်သူတို့ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအိမ်မထောင်မီရှိလိမ့်မည်ဟုအကောင့်သို့ယူကြောင်းညွှန်ပြ လိင်။ ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် [ရေပန်းစားကြီးစိုးကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းညွှန်ပြ22,65].
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက် [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလိင်သရုပ်ဆောင်များ၏ကျားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားကိုစီရင်သောကျယ်ပြန့်ယုံကြည်ချက်အဓိပ်ပာယျ ", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ" ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းညွှန်ပြ15] ။ မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုအလားတူအပြုအမူများအတွက် derogated နှင့် stigmatized ခံရဖို့ယုံကြည်ကြသည်သော်လည်းယောက်ျားလေးများနှင့်ယောက်ျား, nonmarital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များအတွက်အခြားသူများထံမှချီးမွမ်းအပြုသဘောအရည်အသွေးများလက်ခံရရှိရန်စဉ်းစားနေကြသည်။ အမျိုးသမီးတွေအတူတူလှုပ်ရှားမှုအတွက် derogated နေကြသည်သော်လည်းတစ်နည်းအားဖြင့်လူတို့သညျ [, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အကျိုးခံစားနေကြ17,18] ။ အလားတူပဲဒီလေ့လာမှုအတွက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမိန်းကလေးအမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းပေးချေမည်ဟုသူတဦးတည်းကဆိုသည်။ ဒါဟာမိသားစုနှင့်လူမှုရေးအရအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုသူမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်တော်မူ၏ ထိုမှတပါး, သူမ၏ဘဝကိုမိသားစုဂုဏ်အသရေအလျှော့၏ရလဒ်အဖြစ်, အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မိသားစုဂုဏ်အသရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အများကြီးအာဏာရှင်မှနှိမ့်ချရပါမည်သူကိုမိန်းမတို့အားဆန့်ကျင်အတိုင်းဤလေ့လာမှုမှာတင်ဆက်တွေ့ရှိချက် [, အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းယောက်ျားမိသားစုဆက်ဆံရေးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလုပျဆောငျဖို့ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိကွောငျးဖျောပွသောသုတေသနစာပေနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြ65] ။ ဒါဟာ [အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖခင်အုပ်စိုးလည်း၎င်း၏အစီရင်ခံစာကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအားဖြင့်ထင်ဟပ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်66] ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်ယောက်ျားလေးများအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားငြင်းပယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြုသတင်းပို့ခြင်းဖြင့်ဒါသွယ်ဝိုက်လုပ်နေတာမှဝန်ခံခဲ့သည်ခဲ့သူမိန်းကလေးငယ်, ဆန့်ကျင်ကြ, porn ကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်, လိင်နှင့်အလိုဆန္ဒဣတ္မဟုတ်, ထိုလူငယ်အားဖြင့်ကျားမအသွင်မြင်လာအောင်၏ International ညွှန်ပြ; သို့သော်သူတို့ကယောက်ျားကနေမျှော်လင့်ထားကြသည်။ လိင်ကွဲ [အထီးအကြည့်အောက်မှာဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်19] ။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့အလိုဆန္ဒအသံတိတ်နေသည်သော်လည်းထို့ကြောင့်ယောက်ျားပါဝါ၏အနေအထား၌ရှိကြ၏သူတို့လိင်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏ဟောပြောချက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်မိခင်များအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံ၏ International ကဖော်ပြသည်။ Milhausen နှင့် Herold အဖြစ်  ထောက်ပြ, ယောက်ျားနှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ-in ကိုအမြား Internalize အတွင်းသူသာသူမြားမဟုတျပါ, အမျိုးသမီးများအဖြစ်ကောင်းစွာဒါလုပ်ပါ။
ဒီလေ့လာမှုမှာမိခင်များသူတို့သား porn ကြည့်ရှုအားပေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှုရန်တော်မှာ; သို့သော်သူတို့ကသူတို့သမီးတူညီသောလမ်းပြုမူအံ့သောငှါငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ပါမယ်အဲဒီမှာယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေးအဘို့နှစ်ခုလုံးကိုစောင့်ကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်နေတဲ့သိမ်းကျုံးတားမြစ်ချက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏အပြုအမူဆီသို့မိခင်များ '' ထောက်ထားညှာထာသောသဘောထားကဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များရဲ့ရေပန်းစား objectification အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ဒါဟာကြီးစိုးအမြင် Internalize အတွင်းသူနေသောတိကျစွာမိခင်အမျိုးသမီးလူကြီးများသည်။ သူတို့က [ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိသည်နှင့်သူတို့နှစ်သက်သောအကြင်သူ၏နှင့်အတူလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကို "ဆိုး" မိန်းကလေးတွေဖြစ်လာရှောင်ရှားရန်အဓိကအရေးကြီးသောအောက်မှာနေသောအမျိုးသမီးများကိုကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်19] ။ သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပိုမိုကြမ်းတမ်းစွာယောက်ျားထက်စစ်ကြောစီရင်နှင့်အမျိုးသမီး [ပိုများသောသူတို့ကိုယ်သူတို့ "လေးစားမှု" သင့်ကြောင်းသင့်ကြောင်းထိန်းသိမ်းရန်67].
ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှုအတွက်မိခင်များအချို့သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောစကားပြောဆိုမှုသည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမိသားစုထဲမှာအဖေ၏အမျက်တော်ကြောက်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလေးတွေနဲ့အတူပြောနေတာကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တှငျအဘယျကဒီလေ့လာမှုကနေပေါ်ပေါက်ခွငျးတညျးဟူသော, အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကအခြားအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေနဲ့အတူအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နှိုင်းယှဉ်သည့်သိမ်းကျုံးတားမြစ်ချက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောပေးခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဟောပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများကန်းမျက်စိကိုဖွင့်နေချိန်တွင်မွတ်စ်လင်လူငယ်များသည်အားဖြင့်လျှို့ဝှက်အရက်သောက်သာရှိပြီးပြည်ပမှအရက်သောက်သုံးခြင်းအပေါ်အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်ဥပမာ, တားမြစ်ချက် .
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း ambivalence နှင့်ပြည်တွင်းပဋိပက္ခလူငယ် porn ကြည့်ရှုခံစားဖော်ပြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်စဉ်နှင့်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရသည်။ သူတို့ကဤသူခံစားချက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေတ်မီခြင်းနှင့်အစဉ်အလာတန်ဖိုးများအကြားကငျြ့ဝတျပဋိပက္ခ၏ပေါ်ထွန်းကဆိုသည်။ သူတို့ခံစားရပြင်းစွာသောအပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခ [အာရပ်မြီးကောင်ပေါက်ခေတ်မီခြင်းနှင့်အစဉ်အလာတန်ဖိုးများအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်တွေ့ကြုံခံစားအတွက် duality ညွှန်ပြသောလေ့လာမှုများနှင့်အတူကိုက်ညီ10] ။ ဤသည်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်မျှအခြားမီဒီယာအစဉ်အဆက်မတိုင်မီပြုသမျှသောလမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ contents တွေကိုလက်လှမ်းကိုဖန်ဆင်းသောမီဒီယာအသစ်တော်လှန်ရေးကအားဖြည့်နေပါတယ်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုလူငယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့သူတို့အမှန်တကယ်ပြုမူလမ်းကိုကြားတွင်လိင်ဆွေးနွေးရန်လမ်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ မြီးကောင်ပေါက် porn ကြည့်အောက်ပါသူတို့ရဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ငွေညှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဖို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမြီးကောင်ပေါက်အညီညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ contents တွေကိုဆောင်မှအမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါထိတွေ့မှု, ။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေကိုလည်း [ကမ္ဘာအနှံ့လူငယ်၏အခြားလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိပြီ12,59,69] နှင့်အထူးသဖြင့်အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း။
ဤလေ့လာမှု၏ကန့်သတ်မှုကြောင့်အရည်အသွေးလေ့လာမှုကြောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုကွောငျ့, ကတပြင်လုံးကိုလူဦးရေကိုကိုယ်စားပြုလို့မရပါဘူး။ သို့သျောလညျးကိုသာအရည်အသွေးသုတေသနဖြစ်နိုင်လိင်တစ်လူမှုရေးမညီကြောင်းဖြစ်သောပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခု In-depth စကားပြောဆိုမှုလုပ်ဆောင်သွားရန်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်၏အစွန်းရောက် sensitivity ကိုပေးအင်တာဗျူးတွေဘိုးဘေးတို့နှင့်ကျင်းပလို့မရပါ။
Follow-up, လေ့လာမှုများလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကိစ္စရပ်များတွင်အလင်းကိုသွန်းဖို့ဘိုးဘေးတို့နှင့်အင်တာဗျူးထည့်သွင်းရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းငှါ, ။ ဒါဟာလိင်ဟောပြောချက်ကောက်ယူဖြစ်ပါတယ်လမ်းနှင့်မည်သို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးအပေါ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Follow-up, လေ့လာမှုများမတူညီသောဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုများအတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်တဲ့အရေအတွက်အတိုင်းအတာဒီဇိုင်းပေလိမ့်မည်။
ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်များ၏ psyche အတွင်းထွက်ကစားသောကွန်ဆာဗေးတစ်များနှင့်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုများအကြားကဒီရုန်းကန်သောလေ့လာမှုများ၏အလငျး၌ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ လိင်ပညာရေး၏မရှိခြင်း, သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေမြီးကောင်ပေါက် '' လိုအပ်; နှင့်အွန်လိုင်း porn ၎င်းတို့၏အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါထိတွေ့မှုအပေါငျးတို့သဟောပြောချက်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဤ conflictual အခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ထိရောက်သော tools များပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ လေ့လာမှုကနေပေါ်ပေါက်သောကောက်ချက်နှင့်ထောက်ခံချက်ကြောင့်ကျောင်းစနစ်ဖြင့်ဒါဝေးပြုမိခဲ့ပြီးအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်လိုက်ဖို့ data transmit လုပ်ဖို့မလုံလောကျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့မရှိခြင်း၏အကြမ်းဖက်အကျိုးဆက်များကိုတားဆီးဖို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောစကားပြောဆိုမှုအားပေးမယ့်နည်းလမ်းရှာရန်လိုအပ်ပေသည်။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထား, ပွင့်လင်း၌စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် critical ထုံးစံလူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို, porn ကြည့်ရှုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ရှာဖွေရေးကိုရည်မှတ်ပိုပြီးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
Gańczak M က, Barss P ကို, Alfaresi က F, Almazrouei S က, Muraddad တစ်ဦးက Al-Maskari အက်ဖ်ဟာတိတ်ဆိတ်ချိုး: HIV / AIDS ရောဂါအသိပညာ, သဘောထားများနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအာရပ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားပညာရေးလိုအပ်ချက်များကို။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2007 ဇွန်; 40 (6): 572.e1-572.e8 ။ [CrossRef] [Medline]
Roudi-Fahimi အက်ဖ် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၂၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၃ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကရှိအမျိုးသမီးများမျိုးပွားမှုကျန်းမာရေး URL: https://assets.prb.org/pdf/WomensReproHealth_Eng.pdf [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်နုပျိုမွတ်စလင်နှင့်ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏အချိန်ကိုက်အတွက် Agha အက်စ်အပြောင်းအလဲများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2009 ဒီဇင်ဘာ; 38 (6): 899-908 ။ [CrossRef] [Medline]
Dialmy တစ်ဦးက, Uhlmann AJ ။ ခေတ်ပြိုင်အာရပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိင်။ Soc စအို 2005; 49 (2): 16-33 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား]
Foster လေး, Wynn L ကို, Rouhana တစ်ဦးက, Poly ကို C, Trussell ဂျေမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး, အာရပ်ကမ္ဘာနှင့်အင်တာနက်: တစ်ခု Arabic အဘိဓါန်ဘာသာစကားအရေးပေါ်ဓတေားကို web site ၏အသုံးပြုမှုပုံစံများ။ စျေးကြီးသော 2005 သြဂုတ်; 72 (2): 130-137 ။ [CrossRef] [Medline]
Roudi-Fahimi F, El Feki S. Washington, DC; ၂၀၁၁ ခုနှစ်၏ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များ - အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကရှိလူငယ်များလိင်နှင့်မျိုးပွားမှုကျန်းမာရေး URL - https://assets.prb.org/pdf11/facts-of-life-youth-in-middle-east.pdf? [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Hamad SN ။ ကူဝိတ်အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအင်တာနက်စွဲ။ မိုးခုံး 2010 မတ်လ 16; 18 (2): 4-16 ။ [CrossRef]
Kheirkhah က F, Ghabeli Juibary တစ်ဦးက, Gouran တစ်ဦးက, Hashemi အက်စ်အင်တာနက်စွဲ, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် epidemiological features တွေ: အီရန်နိုင်ငံမှာပထမဦးစွာလေ့လာမှု။ EUR စိတ်ရောဂါကုသမှု 2008 ဧပြီ; 23 (ဖြည့်စွက် 2): S309 ။ [CrossRef]
Massad စင်ကာပူဒေါ်လာ, Karam R ကို, et al ဘရောင်း R ကို, Glick P ကို, Shaheen M က, Linnemayr S က။ အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းအန္တရာယ်အပြုအမူ၏သဘောထားအမြင်: တစ်အရည်အသွေးစုံစမ်းစစ်ဆေး။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2014 နိုဝင်ဘာ 24; 14: 1213 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Zeira တစ်ဦးက, Astor RA, ဣသရေလအမျိုး၌ဂျူးနှင့်အာရပ်ပြည်သူပိုင်ကျောင်းများတွင် Benbenishty R. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်။ ကလေးသူငယ် Negl 2002 ဖေဖော်ဝါရီအလွဲသုံးစားပြုမှု; 26 (2): 149-166 ။ [CrossRef]
RL, Falligant JM အလက်ဇန္ဒား AA ကို, Burkhart BR fix ။ ပြိုင်ပွဲနှင့်သားကောင်အသက်အရွယ်ကိစ္စ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual ပြစ်မှုများနှင့်အတူချုပ်ထားအာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပအမေရိကန်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို။ လိင်ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ် (လာမည့်) ၏ 2017 ဇူလိုင် 31 EPub အလွဲသုံးစားပြုမှု။ [CrossRef] [Medline]
Tomaszewska P ကို, ပိုလနျတက်ကသိုလျကြောငျးသားတို့တွင်အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သားကောင်နှင့်ကျူးလွန်၏Krahéခခန့်မှန်း: တစ် longitudinal လေ့လာမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2018 ဖေဖော်ဝါရီ; 47 (2): 493-505 ။ [CrossRef] [Medline]
Alquaiz လေး, Almuneef MA, Minhas HR ။ လိင်ပညာရေး၏အသိပညာ, သဘောထားများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဗဟိုဆော်ဒီအာရေဗျအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအတွက်အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အကြား။ ဆော်ဒီ Med J ကို 2012 စက်တင်ဘာ; 33 (9): 1001-1009 ။ [Medline]
Metheny WP, Espey EL, Bienstock J ကို, ကော့သည် SM, နိုင်ကြောင်းအက်စ်အက်စ်, Goepfert AR, et al ။ အမှတ် to: ဆေးပညာဆိုင်ရာပညာရေးအခြေအနေတွင်အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီး: သင်ယူသူ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုအကဲဖြတ်။ နံနက် J ကို Obstet Gynecol 2005 ဇန်နဝါရီ; 192 (1): 34-37 ။ [CrossRef] [Medline]
Milhausen RR, Herold ES ။ လိင်နှစ်ဆစံနေတုန်းပဲတည်ရှိနေပါသလား? တက္ကသိုလ်အမြိုးသမီးမြား၏သဘောထားအမြင်။ J ကိုလိင် Res 1999 နိုဝင်ဘာ; 36 (4): 361-368 ။ [CrossRef]
ဟော်လန် J ကို, Ramazanoglu ကို C, ရှပ်က S, သွန်မ်ဆင် R. ဦးခေါင်း၌အမျိုးသား: လူငယျမြား, လိင်ကွဲနှင့်ပါဝါ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: Tufnell စာနယ်ဇင်း; 1998 ။
ဂရင်း K ကို Faulkner SL ။ ကျား, မ, လိင်နှစ်ဆစံအတွက်ယုံကြည်ချက်များနှင့်လိင်ကွဲချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2005 သြဂုတ်; 53 (3-4): 239-251 ။ [CrossRef]
MJ ခရစ် Fraley R. လိင်နှစ်ဆစံအပေါ်လူမှုရေးအပြန်အလှန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမှန်ခြစ်သည်။ Soc 2007 မတ်လသြဇာလွှမ်းမိုး;2(1): 29-54 ။ [CrossRef]
Tolman DL ။ Desire ၏ပြဿနာများ: ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများလိင်အကြောင်းကိုပြောဆိုပါ။ ကင်းဘရစ်, MA: Harvard University Press မှ, 2005 ။
Koenig MA, Zablotska ငါ Lutalo T က, Nalugoda က F, Wagman J ကို, Grey က R. Rakai, ယူဂန်ဒါနိုင်ငံဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးတွေအကြားပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတင်းအကျပ်။ int Fam Plan ကိုရှုထောင့် 2004 ဒီဇင်ဘာ; 30 (4): 156-163 [အခမဲ့အပြည့်အဝကိုစာသား] [CrossRef] [Medline]
Schulz JJ, Schulz အယ်လ်အသက်အရွယ်၏အမှောင်: တာလီဘန်အောက်မှာအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေ။ ငွိမျးခမျြးရေး Conf 1999;5(3): 237-254 ။ [CrossRef]
Sodhar ZA, Shaikh AG, Sodhar KN ။ အစ္စလာမ်မှအမျိုးသမီးများ၏လူမှုရေးအခွင့်အရေး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ အောက်ခြေ 2015; 49 (1): 171-178 ။
Arfaoui K ကို Moghadam VM က။ အမျိုးသမီးများနှင့်တူနီးရှားအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှု: အာရပ်စကားစပ်အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု, မူဝါဒနှင့်နိုင်ငံရေး။ Curr Sociol 2016 ဧပြီ 13; 64 (4): 637-653 ။ [CrossRef]
Moghadam VM က။ သီအိုရီ, အလေ့အကျင့်များနှင့်အလားအလာ: အာရပ်နွေဦးအပြီးအမျိုးသမီးများနှင့်ဒီမိုကရေစီ။ ခုနှစ်တွင်: Shalaby M က, Moghadam VM က, အယ်ဒီတာများ။ အာရပ်နွေဦးအပြီးအမျိုးသမီးများလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း။ နယူးယောက်: Palgrave အေ; 2016: 193-215 ။
မိသားစုက Cooney အမ်မရဏ: ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုအကြမ်းဖက်မှုများ။ Punishm Soc 2014 အောက်တိုဘာ; 16 (4): 406-427 ။ [CrossRef]
သြစတြေးလျအတွက်လူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းမှရေလွှမ်းမိုးခြင်းအမ် Exposure ။ J ကို Sociol 2007 မတ်လ 01; 43 (1): 45-60 ။ [CrossRef]
lo V ကို, ဝေ R. တတိယပုဂ္ဂိုလ် Effect, ကျား, မ, နှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်း။ J ကိုအသံလွှင့် Electron မီဒီယာ 2002 မတ်လ; 46 (1): 13-33 ။ [CrossRef]
Cooper ကတစ်ဦး, Boies S က, Maheu M က, Greenfield ဃလိင်နှင့်အင်တာနက်: လာမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး။ ခုနှစ်တွင်: လူ့လိင်အပေါ်စိတ်ဓာတ်အမြင်များ။ နယူးယောက်, NY: Wiley; 1999: 519-545 ။
Mitchell က KJ, Wolak J ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှူဆွယ်တောင်းခံ, နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏လူငယ်အစီရင်ခံစာများတွင် Finkelhor ဃ Trends ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2007 ဖေဖော်ဝါရီ; 40 (2): 116-126 ။ [CrossRef] [Medline]
Wolak J ကို, Mitchell ကငွေကျပ်, Finkelhor ဃမလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကအမျိုးသားနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်။ ကလေးအထူးကု 2007 ဖေဖော်ဝါရီ; 119 (2): 247-257 ။ [CrossRef] [Medline]
Lenhart A, Ling R, Campbell S, Purcell K. Pew အင်တာနက်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်Aprပြီ ၂၀ ရက်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများ - သူငယ်ချင်းများနှင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းဗျူဟာ၏အဓိကအချက်အလက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်များကလက်ခံသည့်အခါစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းသည်ပေါက်ကွဲသွားသည်။ http://www.pewinternet.org/2010/04/20/teens-and-mobile-phones/ [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Lenhart A၊ Purcell K၊ Smith A၊ Zickuhr K. Pew အင်တာနက်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်။ လူမှုမီဒီယာနှင့်လူကြီးများ URL: http://www.pewinternet.org/2010/02/03/social-media-and-young-adults/ [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Lawsky Re ရိုက်တာ။ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ ၂၄။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွင်အမေရိကန်လူငယ်လမ်းကြောင်း - စစ်တမ်း URL - https: / / www reuters.com/ ဆောင်းပါး / ကျွန်တော်တို့ကို-Internet-လူငယ် / American-လူငယ်-လမ်းကြောင်း-In-အင်တာနက်အသုံးပြု-စစ်တမ်း-idUSTRE4AN0MR20081124 ။ [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Livingstone S, Helsper EJ ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်သောအခါအန္တရာယ်များကိုယူခြင်း - အွန်လိုင်းအန္တရာယ်များကိုလူငယ်များ၏အားနည်းချက်တွင်အော့ဖ်လိုင်းလူမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ၏အခန်းကဏ္။ ။ Inf Commun Soc 2007 အောက်တိုဘာ; 10 (5): 619-644 ။ [CrossRef]
Holloway က S, ချစ်သူများနေ့ G. အ Cyberkids: တစ်ဦးတွင်-လိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်လူငယ်အထောက်အထားတွေကိုနှင့် Communities ။ နယူးယောက်, NY: Routledge; 2014 ။
Mesch GS ။ လူမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက် 2009 ဇွန်; 32 (3): 601-618 ။ [CrossRef] [Medline]
ယန်းလိုင် P ကိုသည် Dong Y ကို, ဝမ် M က, ဝမ် X တို့မှာညစ်ညမ်း၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်စည်းမျဉ်း: ပြည်တွင်းရေးပြစ်ဒဏ်, အနုတ်လက္ခဏာပြင်ပနှင့်ဥပဒေရေးရာအဖေဘက်က။ J ကို Glob Econ 2014;3(128):2။ [CrossRef]
Balmer Jr အက်စ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပညတ်တရား၏အကန့်သတ်။ ASLR 2010; 1: 66 ။
ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်း: သုတေသန 20 နှစ်ပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုလိင် Res 2016 မတ်လ; 53 (4-5): 509-531 ။ [CrossRef] [Medline]
Mitchell က KJ, Finkelhor: D, Wolak ဂျေအင်တာနက်အပေါ်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရန်လူငယ်များ၏ထိတွေ့မှု: အန္တရာယ်, သက်ရောက်မှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း။ လူငယ် Soc 2003 မတ်လ 01; 34 (3): 330-358 ။ [CrossRef]
Greenfield pm တွင်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်းမှအမှတ်တမဲ့ထိတွေ့: ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိသားစုများအတွက် peer-to-peer file-sharing ကွန်ရက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို Apple က Dev မှ Psychol 2004 နိုဝင်ဘာ; 25 (6): 741-750 ။ [CrossRef]
Livingstone S, Bober M. London, ယူကေ - လန်ဒန်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း၊ ၂၀၀၅ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကလေးများအွန်လိုင်းသို့သွားသည်။ အဓိကစီမံကိန်းတွေ့ရှိချက် URL ၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ။ http://eprints.lse.ac.uk/399/ [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှုနှင့်မကျူးလွန်ထားသောလိင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာမှုအပေါ်သဘောထားများ - ဆက်စပ်မှုရှိသလား။ Commun Res 2008 သြဂုတ် 04; 35 (5): 579-601 ။ [CrossRef]
ပယ်ရီ LD ။ 2016 ဇွန်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏ကလေးများအပေါ်သက်ရောက်မှု - http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/the-impact-of-pornography-on-children [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Lim က MS, Agius PA, Carrotte ER, Vella AM, Hellard ME ။ သြစတြေးလျလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ Aust NZJ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2017 သြဂုတ်; 41 (4): 438-443 ။ [CrossRef] [Medline]
အညိုရောင် BB ။ “ မင်းဘယ်သူနဲ့သွားနေတာလဲ။ ” - သက်တူရွယ်တူအုပ်စုသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုလွှမ်းမိုးသည်။ In: Furman W၊ Brown BB, Feiring C၊ အယ်ဒီတာများ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Romantic ဆက်ဆံရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ် - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း၊ 1999: 291-329 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Connolly J ကို, Goldberg ကအေရိုမန်းတစ်ဆက်ဆံရေး: မိမိတို့၏ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မိတ်ဆွေများနှင့်ရွယ်တူများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ခုနှစ်တွင်: Furman W က, Brown က BB, Feiring ကို C, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်ရိုမန်းတစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ နယူးယောက်, NY: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1999: 266-290 ။
Valkenburg pm တွင်, ပတေရုဂျေ, Walther JB ။ မီဒီယာသက်ရောက်မှု: သီအိုရီနှင့်သုတေသန။ Annu ဗြာ Psychol 2016 ဇန်နဝါရီ; 67: 315-338 ။ [CrossRef] [Medline]
Morrison TG, Ellis SR, Morrison MA, Bearden A, Harriman RL ကနေဒါအမျိုးသားများ၏နမူနာတစ်ခုအနေဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ခန္တာကိုယ်၌လေးစားမှု၊ လိင်အင်္ဂါသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစားမှုများနှင့်ထိတွေ့မှု။ J အမျိုးသားများအတွက်လုံး 2007 ခုနှစ်မတ်လ 1; 14 (2): 209-222 ။ [CrossRef]
Byrne: D, Osland ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် erotica / ညစ်ညမ်း: ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပပုံရိပ်။ ခုနှစ်တွင်: Inzuchman T က, Muscarella က F, အယ်ဒီတာများ။ လူ့လိင်အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သ က်. ။ နယူးယောက်, NY: Wiley; 2000: 283-305 ။
Mikorski R ကို, Szymanski DM ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အမျိုးသမီးများအားအမျိုးသားများလိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။ Psychol အမျိုးသား Masc 2017 အောက်တိုဘာ; 18 (4): 257-267 ။ [CrossRef]
Morelli M က, Bianchi: D, Baiocco R ကို, ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူကြီးများအကြားတွင် Pezzuti L ကို, Chirumbolo အေ sexting, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှု။ Psicothema 2016 မေလ; 28 (2): 137-142 ။ [CrossRef] [Medline]
Bianchi: D, Morelli M က, Baiocco R ကို, Chirumbolo အေ sexting မြို့ရိုးပေါ်မှာမှန်အဖြစ်: ခန္ဓာကိုယ်-လေးစားမှုကိုတွက်ချက်, မီဒီယာမော်ဒယ်များနှင့် objectified-ခန္ဓာကိုယ်သတိ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက် 2017 ဒီဇင်ဘာ; 61: 164-172 ။ [CrossRef] [Medline]
Seto MC, Maric တစ်ဦးက, Barbaree HE ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ etiology အတွက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အကြမ်းဖက်ပြုမူနေ 2001 ဇန်နဝါရီကျူးကျော်;6(1): 35-53 ။ [CrossRef]
ဆိုက်ဘာအလေ့အထကနေ psychopathology မှ Kadri N ကို, Benjelloun R ကို, Kendili ငါ Khoubila တစ်ဦးက, Moussaoui ဃအင်တာနက်နှင့်မော်ရိုကိုအတွက်လိင်။ Sexologies 2013 ဧပြီ; 22 (2): e49-e53 ။ [CrossRef]
Brombers M, Theokas C. Washington, DC; ၂၀၁၃ မေလ ၀ င်ငွေနည်းကျောင်းသားများနှင့်အရောင် URL ရှိသောကျောင်းသားများအတွက်ဖန်မျက်နှာကျက်ကိုချိုးဖောက်သည်။ https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543218.pdf [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Kasemy Z ကို, Desouky DE, အဲဂုတ္တုလူတို့သည်အကြား Abdelrasoul G. အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း။ လိင်သတ်ဖို့ 2016 မတ်လ 12; 20 (3): 626-638 ။ [CrossRef]
Hawi NS ။ လက်ဘနွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်စွဲ။ ကွန်ပျူတာကလူ့ပြုမူနေ 2012 မေလ; 28 (3): 1044-1053 ။ [CrossRef]
Owen EW, Behun RJ, Manning JC, ရိဒ် RC ။ မြီးကောင်ပေါက်ရက်နေ့တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနသုံးသပ်ချက်။ လိင်စွဲ compulsive 2012 ဇန်နဝါရီ; 19 (1-2): 99-122 ။ [CrossRef]
Creswell JW, Hanson WE, Clark က Plano VL, Morales အေအရည်အသွေးသုတေသနဒီဇိုင်းများ: ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး။ Couns Psychol 2007 မတ်လ 01; 35 (2): 236-264 ။ [CrossRef]
မိဘ AS, Teilmann, G, Juul တစ်ဦးက, Skakkebaek NE, Toppari J ကို, Bourguignon JP ။ သာမန်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ precocity ၏အသက်ကန့်သတ်ခြင်း၏အချိန်ကိုက်: ကမ္ဘာတဝှမ်းမူကွဲ, လောကခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်အပြောင်းအလဲများကို။ Endocr ဗြာ 2003 အောက်တိုဘာ; 24 (5): 668-693 ။ [CrossRef] [Medline]
Hsieh က H ကို, Shannon SE ။ အရည်အသွေးအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့သုံးချဉ်းကပ်။ Qual ကျန်းမာရေး Res 2005 နိုဝင်ဘာ; 15 (9): 1277-1288 ။ [CrossRef] [Medline]
Corbin J ကို, အရည်အသွေးသုတေသန Strauss အေအခြေခံ: နည်းပညာနှင့်မြေပြင်သီအိုရီ Developing များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။4Edition ကို။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage; 2015 ။
Roudi-Fahimi အက်ဖ် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၂၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၃ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိကရှိအမျိုးသမီးများမျိုးပွားမှုကျန်းမာရေး URL: https://www.prb.org/womensreproductivehealthinthemiddleeastandnorthafricapdf234kb/ [[2018-10-01 ဝင်ရောက်]WebCite ကက်ရှ်]
Erez အီး, Ibarra PR စနစ်, ဂုရ OM ။ ပုဂ္ဂလိကနှင့်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခဇုန်၏လမ်းဆုံမှာ: ဣသရေလအမျိုး၌အာရပ်အသိုက်အဝန်းအတွက်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု policing ။ int J ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Ther comp Criminol 2015 သြဂုတ်; 59 (9): 930-963 ။ [CrossRef] [Medline]
Yasmin R ကို, အယ်လ် Salibi N ကို, အယ်လ် Kak က F, Ghandour အယ်လ်တက္ကသိုလ်လူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းပွဲဦးထွက်ရွှေ့ဆိုင်း: ဘယ်လိုယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသူတို့သဘောထားအမြင်, တန်ဖိုးများနှင့် Non-ထိုးဖောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ကွာခြားသလဲ? အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင် 2015; 17 (5): 555-575 ။ [CrossRef]
Allen ကအယ်လ်မိန်းကလေးများ, လိင်ချင်ယောက်ျားလေးများမေတ္တာတော်ကိုလိုခငျြ: (hetero) လိင်၏ကြီးစိုးဟောပြောချက်များခုခံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 2003 မေလ 11;6(2): 215-236 ။ [CrossRef]
Baron-Epel အို Bord S က, ဧလိယ W က, Zarecki ကို C, Shiftan Y ကို, ဣသရေလအမျိုး၌အာရပ်အကြား Gesser-Edelsburg အေအရက်သုံးစွဲမှု: တစ်အရည်အသွေးလေ့လာမှု။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း 2015 ဇန်နဝါရီ; 50 (2): 268-273 ။ [CrossRef] [Medline]
Falligant JM အလက်ဇန္ဒား AA ကို, Burkhart BR ။ ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ပစ္စည်းအပိုင်စစ်ဆေးစီရင် Juvenile ၏အန္တရာယ်အကဲဖြတ်။ J ကို Forensic Psychol Pract 2017 ဖေဖော်ဝါရီ 16; 17 (2): 145-156 ။ [CrossRef]